Fadlan Badda Xaggee Loo Maraa by Nuuraddiin Faarax
By ibrahim Aden shire April 19, 2018
Waxaan jeclaystay inaan turjumo qormo ku saabsan sababta Soomaaliya ay u noqotay goolka quwadaha adduunka iyo sida ay Itoobiya waligeed uga quusan inay qayb ka hesho badda Soomaaliya. Maqaalkaan waxaa afka Ingiriiska ku qoray Nuuradiin Faarax oo ah qoraa Soomaaliyeed oo dunida caan ka ah. Wuxuu daggan yahay Koonfur Afrika wuxuuna dhige ka yahay jaamacad ku taal Maraykanka. Maqaalkan waxaa la qoray dhammaadki 1978di waxaadse mooddaa farriinta uu gudbinayo mid maanta la qoray. Qoramada waxaan kasoo dheegtay Hiiraan.com halkaan ayaana laga heli karaa: https://hiiraan.com/op4/2018/mar/157315/which_way_to_the_sea_please_horn_of_africa_journal_oct_dec_1978.aspx.
Boqollaal sano ayaa lagu dirirayay Soomaaliya iyo hanashada baddeeda. Qarniyaal badan ayay quwadaha adduunku kusoo duulayeen Soomaaliya, qabsanayeen dhulkeeda dadkeedana guumaysanayeen. Khilaafadii Cuthmaaniyiinta, Khedifkii Masar ee wakiilka u ahaa Cuthmaaniyiinta kasoo qabsaday Soomaaliya oo dhan ilaa Eritareeya, Boortiqiiska, F…
Iskoollada caadada khilaafay (schools that defy the odds)
By ibrahim Aden shire April 12, 2018
Sida ciwaanku tusayo halkaan waxaan idin kula wadaagayaa xog la xariirto iskoollo ku yal qaaradda Afrika oo ka yaabiyay bahda waxbarashada.
Waxaa maxay caadada ay khilaafeen?
Dunida oo dhan waxay ka simantahay in tayada waxbarashadu ku xiran tahay lacagta iskoolka soo gasho. Lacagtaan waxay noqon kartaa mid ay keentay meesha uu iskoolku ku yaal sida inuu ku xaafad dad hodan ah dagan yihiin. Waxay sidoo kale ka imaan kartaa in iskoolku yahay mid gaar loo leeyahay sidaasna lacag badan oo ardayda laga qaado iskoolka la galiyo.
Waxaa sidoo kale caan baxday in iskoollada dowladduhu leeyihiin kuna yaal xaafad taagta daran ay had jeer yihiin kuwa ugu tayo hooseeyo dalka oo dhan sidaas darteed ay meel hoose kaga jireen liiska dajaraynta iskoollada. Haddaba waxaa jiro iskoollo koox ah oo sidaasi ka weecday. Iskoolladaan waxay liiska hore kaga jiraan iskoollada ugu fiican waddamada ay ku yaallaan, haddana waa ku yaal xaafado masiintu dagto waxaana maamulo dowladaha dalalkaas.
Sida ay taasi k…
Dalka Ingiriisku wuxuu sheegtaa inuu leeyahay baarlamaanka ugu qaddiimsan dunida. Waxay ku andacoodaan in siddeed boqon oo sano uu jiro baarlamaankooda. Sidoo kale waxay sheegtaan inay leeyihiin baarlamaan…
Waxaan fadhinnay biibito, waqti casar hore sanadki 2006di. Waxaa na soo ak fadhiistay nin soomaali ah da' dhexana ku jiro. Wuxuu yiri waxaa la isoo sheegay inaad ka shaqaysaan halkaas oo aniga shaqo la iigu diray. Barri inaan shaqo tago ayaan rabaa carradana waan ku cusabahay oo ma aqaan meesha aan rabo. Marka inaad meesha i tusataan ayaan …
Jaalle Siyaad waa isbitaal weyn oo ku yaal Garbahaareey. Waxaa dhismihiisa bilowday dowladdii dhexe isagoo qaybo ah ayayna dhacday. dhowr iyo labaatan sano ayuu qabyadaas ahaa oo arigu u xaroon jiray. Waqti aan fogayn ayay gabdho qurbajoog ah isu xilqaameen inay dib u howl gali…
Maxay dhalinta Sacuudigu diinta ooga sii fogaanayaan maxaanse ka baran karaa?
By ibrahim Aden shire March 14, 2018
Sida aan wada ognahay Jasiiradda Carabta maantana loo yaqaan Sacuudi Carabiya waa ubucdi Islaamka waxaana ku yaal Mako iyo Madiino. Waayadii danbe waxaa loo baxshay dhulkii towxiidka taasoo loola jeeday meeshii diinta dib looga soo nooleeyay. Kalimadaan 'baladdu Tawxiid' waxaa si gooni loogu ammaana Sacuudiga culumaddiisa iyo madaxdiisa oo dadku qaar u arkaan inay diinti daba-qabteen.
Hasa yeeshee, dhawaanahaan waxaa soo ifbaxay in dhalin yaradi Sacuudigu kasoo istaageen diinti. Waxaa batay dadka isku tilmaamayo inaysan diinta ku dhaqmin halka qaar ay gabi ahaanba ka baxeen diinta. Sanadki 2012ki, sahan lagu sameeyay 57 dal oo sacuudigu ku jiro natiijadi kasoo baxday ayaa dunida ka yaabisay. Sahankaan wuxuu tusay in dadki reer Sacuudi ee ka qayb galay sahankaas ay 19% isku tilmaameen in ay diinta aaminsan yihiin laakiin aysan ku dhaqmin halka 5% ay isku tilmaameen kuwa aan Rabbi jiritaankiisa aaminsanayn.
Arrintaas waxaa sii xoojinayo tallaabboyinka uu qaaday dhaxal sugaha S…